Madaxwayne Kuxigeenka DDSI Ahna Wasiirka Horumarinta Magaalooyinka, Dhismaha Iyo Warshadaha Oo U Jawaab Celiyay Buux Iyo Riyaale Xaamud. - Cakaara News
Jigjiga(CN) Khamiis.30.Oct.2014, Madaxwayne Kuxigeenka DDSI mudane C/xakiim Cigaal Cumar ayaa u jawaab celiyay Buux iyo Riyaale Xaamud kadib markii uu cidaacada VOA ka hadlay afhayeen sheegay inuu u hadlayay Buux iyo Riyaale Xaamud oo lagu magacaabo Ibraahim Cige.
Madaxwayne kuxigeenka DDSI ayaa sheegay in Dowlada Deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ku aas aasan tahay dastuur iyo nidaam sharciya, wuxuuna sheegay in saddexda madaxwayne kuxigeen ay yihiin qaab dhismeed dowli ah balse aysan ahayn mid qabiil gooni ah loogu talagalay. Taasoo lamida qaab dhismeedyada dowlad deegaanada kale ee Itoobiya.
Mudane C/xakiim Cigaal wuxuu faah faahiyay in qaab dhismeedkan DDSI loo sameeyay in lagula dagaalamo saboolnimada iyo nabadiidka islamarkaana loogu talagalay inuu qaab dhismeedkani deegaanka u horseedo meel horumarineed oo maalgashiga ku haboon.
Madaxwayne kuxigeenku wuxuu sidoo kale sheegay in gobolada iyo degmooyinka uu kakoobanyahay deegaanku aysan ahayn wax uu gorgortan ku gali karo shaqsi ama koox isagoo sheeganaya gobol ama degmo wax uu shaqsi ku qaadan karo.
Mudane C/xakiim waxaa kale oo uu sheegay in go'aanka dowlada federaalka ah ee arinta tuulooyinka Candhuftu, Cadhayto iyo Gadhamayto uu yahay mid muqadis ah xukuumada deegaankuna ay qaadatay.
Waxaana hadaladiisii madaxwayne kuxigeenka kamid ahaa "Buux, Riyaale iyo cidda aaminsan fikiradaasi waxaa lagula talin lahaa in ay khibrad iswaydaarsadaan UUBO."
Ugu danbayn wuxuu Mudane C/xakiim talo bixin ku siiyay inuu Buux iskaqaato lacagta xisbiyada doorashada galaya ay bixiyaan, dharmaydhina uu kadhigto taasoo isaga caado u ah, anaguna aan u ogolnahay balse waxaan cadaynaynaa in aysan jirin fikir aahaan cid uu matalo, ayuu ydhi madaxwayne kuxigeenku.